Mkpughe 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mkpughe E Kpugheere Jọn 12:1-17
12 Ahụkwara m nnukwu ihe àmà n’eluigwe. Ihe àmà ahụ bụ: Otu nwaanyị+ nke yi anyanwụ dị ka uwe, ọnwa dịkwa n’okpuru ụkwụ ya. O kpukwa okpueze e ji kpakpando iri na abụọ mee. 2 Nwaanyị ahụ dị ime. Ebe ọ bụkwa na ime na-eme ya, ọ na-eti mkpu n’ihi mgbu ịmụpụta nwa na-egbu ya nakwa ụfụ ọ na-afụ ya. 3 Ahụkwara m ihe àmà ọzọ n’eluigwe. Ahụrụ m nnukwu dragọn* na-acha uhie uhie,*+ nke nwere isi asaa na mpi iri. O kpukwa okpueze asaa n’isi ya. 4 Ọdụ ya dọkpụụrụ otu ụzọ n’ụzọ atọ nke kpakpando+ ndị dị n’eluigwe, tụdata ha n’ụwa.+ Dragọn ahụ guzokwa n’ihu nwaanyị ahụ+ nke na-aga ịmụ nwa, ka ọ ga-abụ, ọ mụọ nwa, ya erie nwa ahụ. 5 Nwaanyị ahụ wee mụọ nwa nwoke,+ onye ga-eji mkpanaka ígwè taa mba niile ahụhụ.*+ E kukwaara nwa ya ozugbo kugara Chineke n’ocheeze ya. 6 Nwaanyị ahụ gbagakwara n’ala ịkpa, ebe Chineke kwadebere ọ ga-anọ, ka a na-enye ya nri ebe ahụ ruo otu puku ụbọchị na narị ụbọchị abụọ na iri isii (1,260).+ 7 Agha dakwara n’eluigwe: Maịkel*+ na ndị mmụọ ozi ya lụsoro dragọn ahụ agha, dragọn ahụ na ndị mmụọ ozi ya lụsokwara ha agha. 8 Ma, e meriri dragọn ahụ na ndị mmụọ ozi ya,* nke na e nweghịzi ebe ha ga-anọ n’eluigwe. 9 A chụdataziri nnukwu dragọn+ ahụ n’ụwa.+ Ọ bụ ya bụ agwọ mbụ ahụ,+ onye a na-akpọ Ekwensu+ na Setan,+ onye na-eduhie ụwa niile.+ A chụdatara ya na ndị mmụọ ozi ya. 10 Anụkwara m oké olu nke si n’eluigwe sị: “Chineke anyị azọpụtala ndị mmadụ!+ O ji ike ya merie! Alaeze ya amalitela ịchị!+ Kraịst ya amalitela iji ikike o nwere akpa ike, n’ihi na a chụdala onye na-ebo ụmụnna anyị ebubo, onye na-ebo ha ebubo n’ihu Chineke anyị ehihie na abalị!+ 11 Ha merikwara ya+ n’ihi ọbara Nwa Atụrụ ahụ,+ na n’ihi ozi ha zisara.+ Ha ahụghịkwa ndụ* ha n’anya.+ Ọ bụ ya mere na ha atụghị ụjọ ọnwụ. 12 N’ihi ya, ṅụrịanụ ọṅụ, unu ndị bi n’eluigwe. Ụwa na oké osimiri ga-ata ahụhụ+ n’ihi na Ekwensu agbadatala ebe ha nọ. Ezigbo iwe ji ya maka na ọ ma na oge ya fọrọ ntakịrị.”+ 13 Mgbe dragọn ahụ hụrụ na a chụdatala ya n’ụwa,+ ọ kpagburu nwaanyị ahụ+ mụrụ nwa nwoke. 14 Ma e nyere nwaanyị ahụ nku abụọ nke nnukwu ugo,+ ka o fega n’ala ịkpa, ebe a kwadebeere ya. N’ebe ahụ ka a ga-enye ya nri ruo otu oge na oge abụọ na ọkara otu oge*+ ebe agwọ ahụ+ na-anọghị. 15 Agwọ ahụ wee gbụpụta mmiri yiri osimiri n’ọnụ ya n’azụ nwaanyị ahụ, ka mmiri ahụ rie nwaanyị ahụ. 16 Ma ala nyeere nwaanyị ahụ aka. O meghere ọnụ loo mmiri ahụ dragọn ahụ gbụpụtara n’ọnụ ya. 17 Dragọn ahụ wee wesa nwaanyị ahụ iwe, gaakwa ịlụso ndị fọdụrụ n’ime ụmụ* ya agha,+ bụ́ ndị na-edebe iwu Chineke, ndị e nyekwara ọrụ ịgba àmà banyere Jizọs.+
^ Ma ọ bụ “nnukwu agwọ.”
^ Ma ọ bụ “ọbara ọbara.”
^ Ma ọ bụ “onye ga-eji mkpanaka ígwè chịa mba niile.”
^ Maịkel pụtara “Ònye Dị Ka Chineke?”
^ O nwere ike ịbụ, “Ma e meriri dragọn ahụ.”
^ Na Grik, “mkpụrụ obi.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ya bụ, oge atọ na ọkara.